Sihlukunyezwa abamatekisi eMbali | News24
Sihlukunyezwa abamatekisi eMbali
KWELAKHO elingashayi eceleni ngithi angizwakalise ukuhlukumezeka kwami la ematekisini aya eMbali. Njengomphakathi wase Tehuis nabanye abehla endleleni ave sihlukumezeka uma sigibela izithuthi zomphakathi.
Angiqale nje la usagibela erenki … bavele basihlise ematekisini sesihleli basitshele ukuthi bazohamba ngesiSlangpruit ngakho ke ngeke basithathe, kodwa okudidayo ekuseni mebesashoda ngabantu baze bangene ngaphakathi eTehuis besincenga ukuthi asigibele kubona, kahle kahle siyasetsheziswa la.
Uma kwenzekile bakuthatha badlula nawe ngenkani bayodiliva ko Unit 15, Phase 4 or 13 bazebakwehlise sebebuya.
Okunye futhi okwenzekile nje kumasonto amabili edlule bathathe ugogo ephethe impahla erenki yaseMbali washo kahle ukuthi uzowehla erenki yaseMpendle bavuma.
Kuthe nje sekungaphakathi nedolobha wathi umshayeli obengcolile yena akasayi erenki eMpendle ngoba kunesiminyaminya bamehlisa le ezansi nezimpahla bangabe besamubuyisela nemali yakhe.
Angive ngihlukumezekile ngoba ngisale ngazibuza ukuthi uzoya ngani manje umuntu omdala erenki njengoba bengasambuyiseli nemali nje.
Kodwa ke kuko konke obekwenzeka bengiwathatha amanumber plate amataxi ngithi ngiya korank manager bangishaye indiva nabo.
Bengicela ke okungenani sibe nenumber yososeshini esingabafonela uma sihlukumezeka mekukuthi nabo ngeke bacheme nabashayeli bamatekisi. Ngiyabonga
UMGIBELI OKHATHAZEKILE Tehuis